Katz musi Dogs: Jon Katz : Nei Ndinoda imbwa
kubudikidza Jon Katz
Katz musi Dogs : A Commonsense Guide kuna Training uye Living pamwe Dogs
Last updated: Jan. 04 2018 | 9 Maminitsi verenga
Ndiyo mubvunzo vanotarisira imbwa varidzi vanofanira kutanga kubvunza, zvichida chinonyanya kukosha munhu upenyu aine imbwa:
Chinonyanya dzinonetsa zvisarudzo pamusoro hwedu pamwe nembwa kunowanzoitwa tisati aunze kumba. Kuwana imbwa muAmerica kwawanda
nyore. Unogona trawl paIndaneti, kuwana ari mwene, kana kutora imwe puppies vamwe mbudzana ari kupa kunze Supermarket (Handidi zano naro). iwe
auye kuyambuka pakuputika apo kunze achifamba kana uchityaira. Vamwe vanhu vanotsvaka imbwa kuti dombo-zvakaoma zvikonzero dzinoshanda: chibatiso, kunovhima, kurapa, kutsvaka-uye-kununurwa. Asi vakawanda vedu, uti vanachiremba uye behaviorists, vane zvakawanda kwakatooma vavariro mupfungwa uye mupfungwa.
NEI NDINODA A imbwa?
The zvakawanda dambudziko vanhu unobatanidza pamwe chete, ndipo inorava imbwa (uye nezvimwe dzinovaraidza) kuzadza vamwe pakakoromorwa. Tinofanira sokuti kuda uye kudiwa nenzira dziri nyore, wakachena, uye kuvimbwa.
Contemporary America ari, munzira dzakawanda, munhu ichiparara, vakanyarara nenzanga. Our mhuri dzakatamira kure; isu kazhinji hatizivi vavakidzani vedu; vazhinji vedu mugomba usiku, nokudhiraivha pane zviri chidzitiro imwe mhando kana mumwe. Divorce hakuzivani. Basa rava sagadzikana, manhenda vakawanda, kazhinji hachifadzi. Vakawanda sokuti zviri nyore kurarama uye kushamwaridzana nembwa pane umwe, uye saka zvisungo pakati vanhu uye imbwa kukura zvishoma nezvishoma kusimba.
Asi chiitiko ichi muna ukama izvi kwemarudzi maviri ndomumwe kuzviitirwa. Imbwa vazhinji zvakanaka akashanda nevanhu’ kudzamisa kuda, asi imbwa haagoni kuita zvisarudzo zvakafanana. Zviri kudiwa nevanhu kuti anenge nokuda kwounyanzvi zvikuru canine kudanana.
Vanhu vakasarudza kuunza imbwa kupinda nzvimbo hwavo. Nokuti vose fussing nezvekodzero mhuka, Imbwa vane hapana. HavaZvioni kuita yevatengi zvisarudzo. Havachina novimba kwatiri zvose zvavanoda kuti vararame. Havagoni kutaura shure; havana kutaura pamusoro runyararo dzavo kana neramangwana.
Kunyange zvazvo imbwa akabatsira uye vakashanda nevanhu kwezviuru zvemakore, zviri chete mumakumi emakore achangopfuura kuti wauya kuonekwa sechinhu chisiri (zvichida kupfuura) mhuka. Pet-Kuchengetwa akanga akakurumbira pakati akapfuma uye simba mune Ages nguva, anoti mhuka ethicist James Serpell mubhuku Animals uye Human Society: Changing Perspectives, asi hazvina wana kwakapararira chokuremekedzeka kusvikira mukupera nemanomwe remakore, nguva achikura nokushingairira sayenzi dzinongoitika nhoroondo ikawanda nehanya nemhuka’ zvakanaka. kubvira ipapo, kuda kwedu imbwa kwawedzera yekudyidzana. Isu vanhu havasati pedyo mumwe marudzi. Tinopedza makumi emabhiriyoni emadhora ravanotarisira, kudyisa, uye chivaraidzo; kuvapa mazita evanhu; taura navo ivo kwatiri sokunge anogona kunzwisisa; vanotenda tinoziva zvavari kutiudza kudzoka.
emotionalism ichi kazhinji chinotipingirisha imbwa zvatinoda uye anoda. Hazvina hazvigoneki, kunge kunyange Zvaiva zvinotyisa kunyange chizvarwa kare, kunzwa vanhu vanoti pasina ruregerero kana kunyara kuti vanoda imbwa dzavo kupfuura kuda ivo vanhu vakawanda, kuti varege kuona imbwa dzavo sezvo nhengo dzemhuri dzavo, kuti ivo Vanovimba matambudziko avo yapedyo zvikuru uye zvakavanzika imbwa dzavo, vane vakavimbika uye vanonzwisisa pane vabereki, madzimai, vadikani, kana shamwari. Pokupedzera mazuva mashoma muhofisi Vet kuti sechikamu kutsvakurudza wangu bhuku, Ndakashamisika kunzwa mumwe mukadzi pashure perimwe chishuvo, “tsvaka, chiremba, Ndinogona kurarama ndisina murume wangu, asi unofanira kuchengetedza imbwa ichi!” Asi Vets ndiudzeiwo varinzwa dzose nguva.
Uye kwete vakadzi. Zvounhu tsvakurudzo kunoratidza kuti vakadzi vanoda imbwa muchikamu nokuti sokuti vanotsigira mupfungwa asi dzakaoma, kukwanisa kunzwisisa varidzi zvavo zvikuru kunyange kusingatsananguriki nzira. Zvichakadaro, Varume vanoda imbwa nokuti PALS vakakwana, vanofara kuenda kunzvimbo uye kuita zvinhu, asi asingakwanisi kuomerera kana vade kukurukura. Kufanana kana kwete, imbwa yedu’ upbringings vanoratidza edu. Tinowanzofunga kurapa imbwa dzedu nzira takabatwa, kana nzira tinoda isu 'd zvave. Chero nzira, pachedu pasts edu zvikuru kuumba mafungiro edu pamusoro imbwa uye nzira isu chitima uye kukurukura navo.
Kazhinji ichi ndicho chinhu fenda muitiro. Shoma varidzi kuunza zvikuru kuzvidzora kuziva avo canine ukama kana kufungisisa mhuri dzavo pavanenge kuvapopotera imbwa dzavo kuuya, kana vanogurukuta zvinonzwisa kwavari ivo sokunge kunzwisisa. Mumwe mukoti chikoro Ndinoziva vakabata imbwa yake nenzeve ose usiku apo akauya kumba, ndichiomba, “Unondida here? Ndiri zvenyu amai?” Akanetseka nei imbwa akaedza kumhanya kure munguva yataifamba.
Saka vavariro yokuita imbwa kukosha, kana uri kunetseka pamusoro wayo zvakanaka uye vanoda ukama hwakanaka. Ko mhinduro yako nei-a-imbwa mubvunzo kuti zviri nyore kuti kutsvaka ushamwari kubva zvaanoda mhuka pane kubva munhu? Unoda nembwa nemhaka subliminal tutsamba TV uye mabhaisikopu? Uri zvakawanda iwe kushamwaridzana wokununura zvisikwa kupfuura kurovedza uye kurarama navo?
Ko isu chirango nenzira takanga akaranga, kukumbira kwevari kwokuteerera uye vakakwana wakabvunza isu, kumutsoropodza manzwi uye mashoko zvatakanzwa? Tiri maitikiro ekare mitambo yemhuri, kuedza kuporesa traumas? tinogona kutaura nokutendeseka kuti isu kana mumwe munhu mumba yedu anoda kutora basa mupfungwa kuti imbwa, rudo kwete chete asi kudzidzisa uye kuitarisira?
Mumwe mukadzi anonzi Susan vakandiudza aida nembwa nokuti ainzwa kunaka mune gritty, varombo nharaunda iri Elizabeth, New Jersey. Naizvozvo akamuka ane Chirungu mastiff zvokuti wakakura kuti muridzi nokukurumidza akamuita kumupa kure, ipapo mufudzi wokuGermany anonzi Thunder. Imbwa anoita kudzivirira zvinobudirira imba, vakaraira musuo pamberi apo vatorwa akauya. Asi sezvo Susan, anoshanda New Jersey dzaifanoiswa kondakita, concedes iye ari murombo anodzidzisa vaine zvishoma kufarira kushanda pamwe imbwa, iye ane kukiya Thunder muimba yepasi apo shamwari kana hama vanoshanyira. Iye 's kuuya kumba kuwana asingaverengeki zvimedu anobvarurwa-bvarurwa tsamba; imbwa zvinonzwisisika anoona mahamvuropu kuuya nepamusuo slots sezvo ichitya. Iye 's aifanirawo kutsiva ndikamumara madhoo uye mahwindo akaputsika.
By ikozvino, Kutinhira anoyera makumi mapfumbamwe makirogiramu uye kuminyuka Susan zvose pamusoro nomugwagwa apo iye amubvisa. Vavakidzani vavo vari kutya naye, kunyange kumbobvira chaizvoizvo akarumwa kana kukuvadzwa munhu. Imbwa hazvirevi nehasha zvokuti sezvo nehana; ari kuita basa akanga afufurwa kuita, nedambudziko rake kubudirira. asi Susan, uyo anoti iye anoda Thunder, concedes kuti iye kumboda nembwa nokuda yayo nokuda. Zvimwe zvinofanira kutora kosi kuzvidzivirira kana kunzi kambani nokuchengeteka-aramu pachinzvimbo. “Zvingava isingadhuri nokufamba kwenguva, uye nyore.”
Kunzwisisa zvikonzero tinoda imbwa iri musimboti kusarudza ndivo, kuvadzidzisa zvakanaka, kurarama navo vachifara. Patinonyanya kunzwisisa nezvedu, nani kusarudza tingangozviisa kuita zvose zvipenyu.
Paunofunga nezvazvo, ungangove uchiziva zvakawanda vanhu vanotsutsumwa kuti imbwa dzavo vari zvakare kushingaira kana akanyanya ndakagara, Isuwo kufarira kudzinganisana squirrels kana kuvhiringidzika zvokutadza kuuya apo inonzi, zvakare kukudzivirira weimba kana saka nonthreatening ivo dai kubatsira kuita zvinokosha. Kunyange imbwa anowanzonakidzwa mhosva, sezvo kazhinji kwete muridzi akaita anotambudzika kana kurwara-vaiona sarudzo. Naizvozvo, Imbwa zvamutambudza kuva chinhu kunze chii, ukuwo vanhu vane maoko avo azere. With zvishoma pfungwa uye tsvakurudzo, hupenyu imbwa uye vanhu vavo vanogona kuva mugove nyore uye hunogutsa. Asi anoita zvinoda vamwe kunzwisisa kwomunhu pachake kwepfungwa uye manzwiro, vamwe vakafunga pamusoro apo tiri muupenyu hwedu uye kuti imbwa yedu aenderane muna. Jim, muvhimi anogara pedyo neni muNew York, unochengeta beagles matatu hombe usamo 360 mazuva gore. Ivo buda mashomanana mangwanani kwemaawa panorumwe mazuva mashanu chamber mutambo. Vanopedza nguva yakawanda vakamirira, asi kana nguva yasvika, Vanoshamisa ari usamo uye kupinda musango. “Ivo imbwa huru,” anodaro Jim, uyo asina vakatotumidza navo.
Anofarira nokuvaita? Ndakamubvunza kamwe. “Vakati kuita mabasa avo zvandinoita,” akanga achipindura ake. Ndinonzwa reflexively tsitsi imbwa kana ndodzinga kubudikidza, kunyanya kana ini funga imbwa yangu’ vasine upenyu, asi imbwa Jim raMwari, apo vari ruzha, vanoita sevasinganzwisisi vanoziva kunyimwa. Havasi imbwa zvose vaigona kurarama nenzira. Asi beagles Jim unoratidzei mashoko anoshamisa anochinjika dzembwa. Ivo muriko kunovhima, nguva. Jim ane mudzimai nevana uyo iye chose, uye iye anofunga ake kuvaka yakasimba; haachafaniri imbwa kuva chitandadzo wake kana zvake kwemwoyo. Kamwe pazuva, Iye vakuru kunze usamo ane mugomo nyama uye zvimwe uye tosses zviri mukati usamo. At Christmas, anowedzera mugomo mabhisikiti. Vanowana kwepfuti zvavo zvose, uye muone Vet kana vari kurwara. The beagles havasati mukati kumba kwake. Anotaura kwavari manyawi uye kufara, asi vari zvokushandisa, akafanana chibooreso kana pfuti itsva, kwete shoma vanhu, kunyange chaizvoizvo dzinovaraidza ari wepanguva mupfungwa. Asi imbwa sokuti kugutsikana uye utano. Jim anonyatsoziva nei anoda. Ivo kunzwisisa nyore mitemo uye, sezvo imbwa havana ruzivo vepasi nokufamba kwenguva, handizivi yakareba sei vanoenda pakati yakadaro. Zvingasava nzira zhinji vedu aizoshuva kuva imbwa, asi ake Kujeka pamusoro mhando imbwa anoda uye nei sokuti kushanda zvakanaka vose vanobatanidzwa.
Zvadaro pane Andrea, mifananidzo anogara ari mashanu eka papurazi mu Vermont. Nokuti siyana kwezvikonzero dzakaoma, iye wakapiwa pamusoro pfungwa dzevanhu, muchato, mhuri; pachinzvimbo, iye aitsvaka collie kununura boka. iye, wo, akanzwisisa chaizvo nei aida imbwa, uye chisungo ari kuumbwa pamwe vayo sokuti kuti vari vaviri vafare.
“Handina kumbova wakakomborerwa noukama, kanenge haisati,” anoti. “Asi zevezeve uye Ndinoyemura mumwe. Ndine kunakidza zvikuru naye, uye iye zvinondipa kunyaradzwa zvikuru uye rudo. Ndinovimba iye 's bhiriji mumwe ukama, asi kana iye asiri, Ndichava kukuvara.”
Hazvisi ini kutaura uye chokwadi ini handigoni here kusarudza Andrea akaita akachenjera kana utano sarudzo. Asi iye akafunga vavariro dzake, sei wembwa aizoita huchikanganiswa hwake, uye iye akaita vaiona sarudzo.
“Nekuti mbudzana wangu chave vachipemha mumwe” ndiko, pane rimwe divi, kazhinji fungira chikonzero kuwana chipfuwo. Ndicho chimwe vasingazvirumbidzi, asi imbwa vakatenga seKirisimasi isingatarisirwi nokuda vachirayira vana kazhinji vane ine nguva nayo. Vimbiso kuti akaita uye akanganwa; kufarira waachangoroora nenhongonya, ipapo wanes.
kwete nguva dzose. Mumwe muvakidzani-makore gumi okuberekwa zvangu vakakumbira yendarama retriever gore rakapera paKrisimasi uye vabereki vake vakabvuma, ndokunge Jeremy tora basa nokuti. Zvichida vaiva nechivimbo chokuti chaizvoizvo angadai nekuti vaizoenda atova akaratidza kuzvipira kwake zvokudya hove ake uye kuchenesa kunze BoyzMikaro mumakeji.
Chero chiitiko, Jeremy anoita ndinovachengeta Clancy. Iye anofamba pamberi uye pashure chikoro, anodyisa iye, brushes iye, Zvinotora naye kudzidzisa makirasi Mugovera ose. Zuva nezuva ndabva kuchikoro, Jeremy uye Clancy vanorovedza pamwe chete. Imbwa akadzidza kuuya apo inonzi, kugara, gara, unorara pasi murayiro. Vanhu vekumaruwa vanoshamwaridzana zvirongwa 4-H munoziva sei utano zvinogona vana kutora basa mhuka. Vanhu vari mwana- uye imbwa-mipengo Ruwa umo mutemo kazhinji kunenge, duku pachivanze, rokudzora imbwa vanoziva sei kujairika ndizvo. For Jeremy, kuwana imbwa zvinoita sokuti somunhu akanaka chinhu; akaramba shoko rake, kana zvichida vabereki vake akatora kujairika danho vachiti kuti kurichengeta. Chero nzira, Ndava vakasangana vana mashoma akafanana naye. vabereki, chenjera: mumwe mumhuri anofanira kutora guru basa imbwa, uye kana vana regai, Amai kana Baba anofanira asapindire.
Kazhinji vabereki vanopa vana vavo zvinhu vanofunga zvakanaka kwavari mafoni, makombiyuta, imbwa pasina zvikuru kufunga nezvokuti izvi richashandiswa kana kubatwa pashure kuritenga.
Saka nei uchida imbwa?
Kana mhinduro, muchidimbu, kunobva kunzwisisa nhoroondo mupfungwa (sezvo chokwadi nyaya neni), nechokwadi kuti unzwisise uye funga kuburikidza chete chii munokumbirira kana katsi. Pasinei netsika yedu anthropomorphizing imbwa, havanzwisisi chii isu 'Re kufunga uye haagoni kunzwisisa nuances mupfungwa mabasa dzimwe nguva tinofanira kuzvibvunza kuti vazadze. Havagoni kunyange kuzvibata nenzira tsanangudzo yedu amiably kana kwete zvakanaka vakasanangurwa, vazvitambudze, uye vakadzidziswa. Sezvo zvatinotarisira kazhinji zvikuru yakawandisa, tinova nyore mwoyo kana kutsamwa. Pane nouchapupu hwokuti tiri mukusika dambudziko imbwa biters, chewers, barkers, neurotics anoshayiwa antidepressants. Izvi zvinoitika pamwe nokuti vanhu vakawanda kudaro vawane imbwa zvakaipa panguva isiri nguva nokuda kwezvikonzero zvakaipa. Pane tsika chinoumba pokupinza pamusoro imbwa. Kunyange havasi vanokwanisa kwakakwirira-chechetere pfungwa pezvakaitwa, Zvechokwadi Imbwa vane manzwiro. Ivo vanorwadziwa uye kurasikirwa, kutya uye rudo. Izvi vakaapa nedzimwe mhuka vamwe mutsika pakati vanhu hana. Zvingasava havana kuvaregesa chaienzana vana, asi anotibatsira unosungira kufunga sei isu kuvabata. Asi imbwa ose haasi munhu wose. Handigamuchiri kukura, zvematongerwo enyika inopepereswa pfungwa kuti imbwa wose zvakaenzana akakodzera kununurwa, kuti imbwa zvose vanotova zvakafanana mune anochinjika kwavo kwedu tya, ungana, litigious yevanhu zvakatipoteredza. Handina kuwana kuti ichokwadi. Imbwa ferociously idiosyncratic, kusiyanisa wild zvichienderana erudzi, genetics, nemarara ruzivo, mabatiro, uye zvakatipoteredza. Vamwe ndivo Genial uye vakadzikama, akaberekwa nokuda rupfavewo, uye vamwe vane chisimba, akatunhidzwa uye kudzidziswa pakuvhima kana kurwa. Vashoma vedu tine Kudzidziswa unyanzvi kana nguva kuchinja vose avo nemaitiro. Isiri kusarudza imbwa inogona kuratidza rakaomera iwe, mhuri yako, uye vemunharaunda yako; chakarurama, mufaro.
Vamwe imbwa vanofanira kushanda, vamwe musaita; vamwe kuhwanda kutinhira nepo vamwe kunyange kuzviziva; vamwe ruvengo vanhu heti uye nevamwe dzingirira bikes. Haugoni nguva dzose kuziva oddities izvi pachine; vose chokuramba mberi nokungwarira.